Himalaya Dainik » सिरियल ‘साथ निभाना साथिया’की संस्कारी बुहारी गोपी कती धेरै हट ? (फाेटाे फिचर)
सिरियल ‘साथ निभाना साथिया’की संस्कारी बुहारी गोपी कती धेरै हट ? (फाेटाे फिचर)
पोखरा- भारतिय चर्चित टेलि सिरियल ‘साथ निभाना साथिया’बाट दर्शककाे माया र साथ पाएकि नायिका हुन् देवोलीना भट्टाचार्या । उनलाई साथ निभाना साथियाबाट दर्शकले अत्याधिक रुचाए। उक्त सिरियलमा असल छोरी असल बुहारी र शान्त स्वभावको भूमिकामा रहेकी भट्टाचार्याको अभिनयलाई दर्शकहरुले असाध्यै मन पराएका छन् ।
अभिनयबाट निकै चर्चा कमाउन सफल भइन् ‘साथ निभाना साथिया’की गाेपि बहु । असल संस्कारी बुहारीको रुपमा देखिने देवोलीना सिरियलमा मात्र नभई सामाजिक सँजालमा पनि उतिकै सक्रिय रहेकी छिन् । उनले बेलाबेलामा आफ्ना हट तस्विरहरु शेयर गरेकी हुन्छिन् ।
साथियामा नै देवरको भुमिकामा अभिनय गरेका जिगर र देवोलीनाको प्रेमको सम्वन्ध उतिकै चर्चा चलेको थियो । सिरियलमा साडी कुर्तामा सजिने उनी बाहिर भने निकै हट बनेर हिड्छिन् । उनले यतिबेला आफ्ना सुन्दर तस्विरहरु शेयर गरेकी छिन् । उक्त तस्विरमा फ्यानहरुले निकै सुन्दर र हट देखिएको कमेन्ट गरेका छन् ।
उनले इन्स्टाग्राममा बोल्ड अबतारका तस्विर शेयर गरेकी छिन् । उनको सुन्दर तस्विर हामाीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छाैँ ।